China 12-16 Afọ Ogologo Ogologo Nwa nwoke T-Shirt PY-TC003 rụpụta na ụlọ ọrụ | Pinyan
12-16 Afọ Ogologo Ogologo Nwa nwoke T-Shirt PY-TC003
12-16 afọ ogologo nwa nwoke T-uwe elu
1. kinddị uwe elu dị a foraa kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwoke?
Maka ụmụaka, uwe nke agba dị iche iche dabara adaba maka ha - anwụ na ịhụnanya bụ ngwa ngwa maka ụmụaka. Anyị niile nwere mmasị na ọnọdụ na-adịghị ọcha na nke ihunanya nke ụmụaka, yabụ ụmụaka anaghị ahọrọ ụcha uwe. Ọ bụrụ na ha “na - eme otu” otu agba mgbe ha ka dị obere, ha agaghị atụ anya nrọ ha. Ha chọrọ T-shirt nke nwere akpụkpọ anụ na ejiji, ụdị akwa a bụ akwa akwa dị ọcha, ụmụaka na-agba ọsụsọ mgbe ha na-egwu egwu, mgbe ahụ, owu dị ọcha bụ akwa kacha mma na-adọrọ adọrọ, ụmụaka na-eyi nke ọma na enweghị nchịkwa.
2 、 Kedụ uru dị na uwe T-shirts?
White T-shirt dị mfe ma na-agbanwe agbanwe, ọ dị mfe ijikọta ya na agba dị iche iche nke uwe, dị mfe nwuo, yabụ n'oge ọkọchị na-ewu ewu na obere ụmụ nwoke na ndị nne. Dịka ọmụmaatụ, uwe elu T-acha ọcha a dị mfe ma bụrụ ihe nzuzu, na-enwe ụkpụrụ imepụta ihe na-atọ ụtọ n'akụkụ, nke na-eme ka uwe elu T-shirt niile na-agbanwe agbanwe, dị mfe na ejiji.
T-shirt a na-acha ọcha nwere nhazi na-ezighi ezi n'akụkụ. Ihe nkedo nke trapezoidal na-eme ka uwe T-uwe di iche di iche na sexy. T-uwe a dị mfe na nke pụrụ iche nwere ike igosipụta ụdị ejiji ụmụaka n'oge ọkọchị.
Stridị uwe elu na-acha ọcha, T-uwe ọcha na-acha ọcha nke nwere ụdị akara ngosi mara mma, wee nwee ụdị mma, ụdị T-shirt a karịa T-shirt dị ọcha bụ ihe mara mma ma na-atọ ụtọ nka, ejiji na ọmarịcha
Ngwaahịa were: maka uwe otu, nhazi onwe onye, ​​wdg, nwere ike ịhazi agba, ụkpụrụ, akara ngosi.
Q: you Manufacturer ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa?
A: Anyị bụ ndị mbụ na-emepụta ihe na ndị na-ere ahịa ogologo oge nwere ahụmịhe afọ 5.
Q: Gịnị bụ isi ngwaahịa gị?
A: Anyị bụ ndị ọkachamara n'ichepụta akwa akwa ụmụaka, ngwaahịa anyị bụ T-shirts, uwe ogologo ọkpa, mkpụmkpụ, uwe elu, agba, jaket, akwa na akwa ụmụaka maka ụmụaka dị afọ 0 ~ 10.
Q: Gịnị bụ àgwà nke ngwaahịa gị?
A: Anyị nakweere ezigbo mma na Eco-enyi na enyi akwa, ume na ala, ọ dị mma maka ụmụaka akpụkpọ .Anyị ngwaahịa gafere SGS uwe ule.
Ajụjụ: Gini mere ọnụahịa gị ji dị ala karịa ndị na - eweta gị?
A: Biko mara na anyị bụ ndị nrụpụta izizi na ndị ahịa na-ere ahịa, yabụ ọnụahịa anyị dị ala.
Ngwaahịa anyị bụ otu mma ya na ọnụahịa dị ọnụ ala, otu ọnụahịa nwere ogo ka mma.
Q: Enwere m ike ịnweta akara ngosi m na ngwaahịa?
A: Ee, ị nwere ike ịnwe logo maka ngwaahịa. MOQ bụ 50pcs / imewe. biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na iwu iwu.
Q: Gịnị bụ ụzọ oge?
A: Ọ bụrụ na ịtụ nke ugbu a aghụghọ, ha dị njikere iji ụgbọ mmiri .parcels ga-eziga n'ime 7 ụbọchị mgbe ugwo nnata .Ọzọ nnyefe dabere na ebe mba
Ọ bụrụ na omenala ọrụ, kpọmkwem nnyefe oge na-adabere na ihe na nke ukwu nke gị iji.
Q: Olee otu esi edozi nsogbu dị mma mgbe ahịa gachara?
A: Were foto nke nsogbu ahụ zitere anyị. Anyị ga-eme ihe afọ ojuju maka gị n'ime awa 24 mgbe anyị gosipụtara nsogbu ndị ahụ.
Nke gara aga: White Babies Track Suut PY-YR002
Osote: Customizable ihe nakawa etu esi Long uwe Nwa T-uwe elu PY-TC001
100% Cotton Short Sleeve Boy T-uwe elu PY-TD002
Ndi oru ugbo olu Short aka nwa nwoke T-uwe elu PY-TD001
Mmiri na Fall Long Sleeve Boy T-uwe elu PY-TC002
Hot Ree Long uwe nwata T-uwe elu PY-TC004
Customizable ihe nakawa etu esi Long uwe Boy T-Shirt P ...